Ndezvipi zvakakodzera kumashure ekugadzira simba rekuvaka hukama?
Nyaya iyi yakagadzirirwa kukubatsira kunzwisisa zvinonzwisisika zveimwe yezvinonyanya kukosha kutsvaga injini yekugadzira tactic.
Backlinks inokosha pakuumba bhizimisi rakanaka rekushanda muIndaneti. Vashandi veWebmasters uye vavakadzi vekubatanidza nguva dzose vanokakavadzana nezvemaitiro ekuwana ruzivo rwakasvibiswa, maitiro avanoita kuti vararame, uye kuti vangawane sei mikana yekuvakwa kwepamusoro yepamusoro.Chinhu chacho ndechokuti iwe unoda kuumba unhu uye hutano hwehuwandu hwehuwandu hunozvidzivirira kutsvaga injini chirango. Iwe unofanirwa kutarisira nezvemagariro uye mukurumbira webhu hutsva kubva kwaunofambidzana yako iri kuuya nokuti inotaurira kutsvaga injini maererano nezita rako renzvimbo. Nhengo dzako dzinopinda dzinosarudza nzvimbo yewebsite yako, ndicho chikonzero chekubatanidza chivakwa chinofanira kuva chikamu chinokosha chekutengesa uye kutsvaga injini kugadzirisa matanho.
Nhasi tichatarisa pane zvakakonzera shure uye nei vachiita basa rinotungamirira mukusimudzirwa kwewebhu.
Saka chii chinonzi backlinks?
A backlink inonyanya kubuda pane imwe nzvimbo kuenda kune imwe. Kune marudzi maviri eedlinks dofollow uye nofollow. Dof following links ndiwo avo vatinoda kuti tibatsire purogiramu yedu. Izvi zvinobatanidza hutengo kuhutano hwehutano hwehutano huri nenzira inonzi "link juice. "Google bots parse dofollow backlinks uye yakakwirira nzvimbo yepaiti yakatumidzwa. Nofollow backlinks inofanirawo kuiswa munzvimbo yako yekubatanidza kuti uratidze Google kuti unosangana kune zvakasiyana-siyana zvewebhu kwete kungowana jisi rekubatanidza. Izvi zvakabatana zvine taki isina kutevera uye hazvipfuuri chero hunokosha kune zvakabatana. Izvo hazvisi kuonekwa kwekutsvaga bots uye sekutonga, haigoni kuteverwa nevashandisi vepakati. Vanongoshumira semagetsi ekutaura. Zvisinei, kana iwe une nzira yakarurama yekugadzira chikwata chako chekuvaka, iwe uchakwanisa kushandura hapana chekutevera backlinks nevanotevera.
Nei backlinks inoshanda senzira yekuisa muGoogle?
Kana Google ichinyatsoongorora chibatanidzo chinodzokera kumaseri yako, iyo inoshamwaridzana nehuwandu hwekutsvaga nzvimbo yako nehutano hwewebhu inonzi iyo link iri ku. Google inokwezva iyo sevhoti yewebsite. Kana vhoti iri kuuya kubva kunzvimbo yakakurumbira, inogona kuchinja hutachigaro hwepamusoro uye zvakasiyana-siyana kana voti iri kuuya kubva kune spammy, yakaderera web web source, inenge ichikanganisa nzvimbo yako SEO.
Nenzira yakawanda, chirongwa chekuvaka chikwata chinowanzoonekwa nenzira iyi: "Kana imwe nzvimbo yewebhu inoona sechinhu chakagadzirwa kuti chive chakakosha kuti chibatanidze nayo, uye ichi chinyorwa chiri kunyatsorongedza uye chakanyorwa, Link web site inofanira kunge iri webhusaiti yakanaka ". Chinhu chaunoda kufunga nezvawe shure shure
Kuti uwane unhu hwekudzokera shure, unofanirwa kutarisa kunaka kwewebsite iwe iwe angada kuvaka mashizha. Ndicho chikonzero pamusana pepfungwa yako yekuvaka chikwata iwe unofanirwa kutungamira tsvakurudzo yakawanda yekemakethe uye kuwana webhutori izvo zvakakodzera kukoshesa kwako. Nzira yakanakisisa ndeyokutarisana newebsite yePeRRRR uye maBloggi ayo anoshanda kumhizha yako.
Imwe yenzira dzakanakisisa dzekutora backlinks inotumira mushanyi. Iwe unogona nyore nyore kuwana backlinks kunzvimbo yako nekuisa chibatanidzo kune mushanyi wako. Zvinosuruvarisa, zvakawanda zvepamu zvemabasa zvakapoteredza chimiro chekuvaka chibatanidza chinokanganisa mushanyi kutumira mukurumbira. Muna 2012 Google yakagadzirirwa Penguin update iyo yakaparadza mazita ewebsite akashandisa michina yekugadzira spammy.
Ndicho chikonzero mumazuva edu kubatanidza vavaki vachipa mazano ekushandisa magwaro ega ega nekubatanidza kubva kune:
Mutsara unotarisa zvisikwa mumutauro uye hauna kufanana nemazwi anokosha.
Mutsara usingabatanidzi nezita rako.
Zita remusoro wauri kutaura nezvawo.
Panzvimbo yekuvanza backlink yako ne SEO yakanyatsogadziriswa mavara, taurira vaverengi vako ruzivo rwakawanda kuti vaite kuti vanzwisise kuti nei vachida kutevera nheyo yako uye kuti vanogona sei kubatsirwa nayo Source .